Gumiguru dombo rekuzvarwa. Tourmaline & opal. Nyowani yekuvandudza 2021
Tourmaline uye hiakindi ndiwo mabwe maviri echishongo muna Gumiguru, zvinoenderana ese ekare uye echinyakare mazita e oct mabwe ekuberekwa. Dombo remutungamiriri weOctober zvishongo zvindori, zvishongo, mhete nemhete.
Zvinorevei kuti Dombo rekuzvarwa raGumiguru?
Dombo rekuzvarwa ibwe rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waGumiguru: Tourmaline uye hiakindi.
Chii chinonzi girazi rekuzvarwa raGumiguru?
Dombo rekuzvarwa raGumiguru rinowanikwa kupi?
Chii chinonzi Gumiguru dombo rekuzvarwa?
Kwokuwana kupi Dombo rekuzvarwa raGumiguru?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zvematombo ekuberekwa aGumiguru?
Mhete boron silicate chicherwa chakabatanidzwa nezvinhu zvakaita sealuminium, iron, magnesium, sodium, lithium, kana potasium. Tourmaline inorondedzerwa sedombo-rinokosha-dombo uye dombo rinowanikwa mumarudzi akasiyana siyana.
hiakindi iyo hydrated amorphous fomu yesilica. Mvura yaro inogona kubva kubva pa3 kusvika ku21% nekurema, asi kazhinji iri pakati pe6 ne10%. Nekuda kwehunhu hwayo hweamorphous, inoonekwa se mineraloid, kusiyana nemhando dzekristalline dzesilika, dzinoiswa semaminerari. Inoiswa patembiricha yakadzikira uye inogona kuitika mune kutsemuka kwerinenge chero dombo.
Iro rinokosha-dombo Tourmaline inokura mune akati wandei mavara, kubva pane dema kuenda kubhuruu kusvika ku pink. Kunyangwe misiyano iri muna Gumiguru yekuzvarwa dombo inogona kutsanangurwa nedombo remaminerari nziyo, vamwe vanotenda izvozvo Tourmaline Zvinoreva uye mashandisiro emarudzi akasiyana siyana anogona kusiyana kubva pahue kusvika pahue.
Kunze kwemabhuru egumestoni october anoratidza kutamba kweruvara, mamwe marudzi akajairika hiakindi sanganisira mukaka hiakindi, yemukaka bhuruu kune greenish. Resin hiakindi, inova huchi-yero neinotapira inobuda. Moto hiakindi iri pachena kuti ishanduke hiakindi, ine inodziya muviri mavara yeyero kusvika orenji kune yakatsvuka. Kunyangwe zvisingawanzo kuratidza chero kutamba kwemavara, pano neapo ibwe rinoratidza kupenya kwakasvibira kwemavara.
Gem uye specimen Tourmaline inocherwa zvakanyanya muBrazil ne Africa. Zvimwe zvinongedzo zvinokodzera kushandiswa kwegem zvinobva kuSri Lanka neIndia. Pamusoro peBrazil, Tourmaline inocherwa muTanzania, Nigeria, Kenya, Madagascar, Mozambique, Namibia, Pakistan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Belitung Island - Indonesia neMalawi.
Australian hiakindi yakagara ichitaurwa senyika yepamusoro hiakindi. Ethiopia ndiyo chaiyo sosi huru. Moto hiakindi inoitika muhuwandu hwakakura uye zvakasiyana pakati peMexico. Zvimwe zvakakosha dhipoziti ye hiakindi kutenderera pasirese kunogona kuwanikwa muCzech Republic, Canada, Slovakia, Hungary, Turkey, Indonesia, Brazil, Honduras, Guatemala neNicaragua.
Zvishongo zvekuzvarwa zvakagadzirwa ne Tourmaline uye hiakindi. Isu tinotengesa Gumiguru mabwe ekuberekwa mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
Pane zvakanaka Tourmaline uye hiakindi iri kutengeswa muchitoro chedu
Tourmaline inofungidzirwa kuunza masimba ekuporesa kune shaman kana n'anga. Iri ibwe rinogamuchirwa muna Gumiguru, zvinoreva kuti rinozorodza, kudzikamisa, mukati, uye nemagineti, kukurudzira kufungisisa, zvekunamata, huchenjeri nekufungidzira.
Opal yakagara ichibatanidzwa nerudo uye kushuvira, pamwe nechishuwo uye eroticism. Iri ibwe rinonyengedza iro rinosimbisa mamiriro emanzwiro uye rinoburitsa hutachiona. Inogona zvakare kuita seyakagadzikana mupfungwa. Kupfeka opal kunonzi kunounza kuvimbika nekutendeka.
Libra neScorpio mabwe ese ari maviri oct dombo rekuzvarwa.
Chero iwe uri Libra kana Scorpio. Tourmaline uye hiakindi ndiro dombo kubva muna Gumiguru kusvika 1.
October 1 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 2 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 3 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 4 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 5 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 6 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 7 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 8 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 9 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 10 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 11 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 12 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 13 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 14 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 15 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 16 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 17 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 18 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 19 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 20 Libra Tourmaline uye hiakindi
October 21 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 22 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 23 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 24 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 25 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 26 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 27 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 28 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 29 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 30 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
October 31 Scorpio Tourmaline uye hiakindi
Natural Gumiguru dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu gem shopu